Rating: SKU: 129938-20-1. Category: Mmekọahụ Mmebi Hormones
Usoro Molecular: C9H7ClN2O5
Molekụla arọ: 258.62
Ọ bụrụ na dọkịta ahọrọ ngwaahịa a iji gwọọ ejaculation akaghi aka, ọ kwesịrị ịtụle ihe egwu ahụ na uru onye ọrịa kwuru maka izu 4 mbụ mgbe ejiri ọgwụ ahụ mee ihe, ma ọ bụ nyochaa ọnụọgụ ihe ọghọm nke onye ọrịa mgbe ọ jiri usoro ọgwụgwọ 6 oge wee kpebie. ma ịga n'ihu iji ngwaahịa a.
Enwere ike ị nweta otu mbadamba n'otu oge. A ghaghị ị drugụ ọgwụ na afo efu. Ọ ka mma ị drinkụ tii tupu i jiri ya mee ihe nke ọma tupu ọgwụ a kacha mma ịme usoro nyocha zuru oke, dabere na ọrịa ha na dọkịta ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ na-agwa ya na nchedo maka ọgwụ iji zere iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, mana ọ bụghị n'ụzọ na-enweghị isi ugboro ole ị na-a drugụ ọgwụ n'oge You ga-agbaso ndokwa dọkịta na ihere.
1. General-akpachapụ anya. A na-eji Dapoxetine naanị maka ndị nwoke na-arịa ọrịa ejaculation. Nchebe nke Dapoxetine n'ime ụmụ nwoke na-enweghị ịmachacha aka ezighi ezi. N'otu oge ahụ, enweghị data gbasara mmetụta nke Dapoxetine na igbu oge ejaculation na ndị a. A na-atụ aro ka ndị ọrịa ghara ị Beụ Beverly na "ọgwụ ntụrụndụ" n'otu oge n'ihi na amabeghị mmetụta ahụ ma ihe ọjọọ dị egwu nwere ike ime.